Samsung Gear S3 hadda wuxuu leeyahay 3 wajiyo cusub oo waardiye ah | Androidsis
Samsung Gear S3 ayaa sii daayay saddex waji oo cusub oo "aad u shaqeynaya" taas oo u oggolaan doonta dadka isticmaala inay si toos ah hawlo badan ugu qabtaan shaashadda weyn ee saacadooda casriga ah.
Si loo soo bandhigo wajiyadan cusub, oo sidoo kale loo yaqaan fiiri wajiyo ama waji saacado, shirkaddu waxay la shaqeysay seddex qof oo caan ah, halyeeyga Bear Grylls, sawir qaade u dhashay Ruushka Murad Osmann iyo orodyahanka mootada Robert Maddison.
1 Muuqaalka Dibadda ee Samsung
2 Muuqaalka Safarka Samsung
3 Samsung Isboortiga Isboortiga
Muuqaalka Dibadda ee Samsung
Samsung Outdoor Watchface-ka cusub ayaa leh altimitaar dhanka midig ah iyo barometer bidix. Intaas waxaa sii dheer, qaybta hoose waxaad kuheli doontaa taariikhda iyo tilmaame waqtiga, halka qaansada kore aad ku arki karto saacadaha qorrax soo baxa ama qorrax dhaca.
Wajiga saacadani wuxuu kaloo leeyahay habayn gaar ah oo habeenkii ah iyo waliba midabbo badan oo laga kala xusho. Hoos waxaad ka arki kartaa Bear Grylls oo ku ciyaaraya Gear S3 oo leh sheygan shaashadda weyn.
Muuqaalka Safarka Samsung
Dadka xiiseeya safarka, Samsung Travel Watchface waa xulashada ugu fiican, maadaama ay soo bandhigi karto waqtiga iyo heerkulka laba meelood hal mar, iyo sidoo kale inay si deg deg ah u helaan sicirka sarrifka.
Wejigan saacadda ayaa sidoo kale ku tusi doona masaafada aad ku soo martay tilmaamahayga Socdaalkeyga, iyo khariidad faahfaahsan oo ku saabsan meesha aad hadda ku sugan tahay.
Si loo soo bandhigo waxtarka wajigaan, Samsung waxay la midowday sawir qaade iyo musaafir Murad Osmann oo ay weheliso xaaskiisa Natalia (oo caan ku ah taxanaha I raac ama I raac).
Samsung Isboortiga Isboortiga
Wejigan saacadda waxaa loogu talagalay cayaaraha iyo taageerayaasha dhaqdhaqaaqa jirka. Dhinaca midig ee dialku wuxuu leeyahay saacad, halka dhinaca bidixna uu ka muuqdo xawaare xawaare. Dhinaca kale, waxay sidoo kale muujineysaa garaaca wadnaha iyo tirada kalooriyada gubatay.
Ugu dambeyntiina, waxaad awoodi doontaa inaad ka hesho khariiddada waddooyinkaaga adoo maraya tilmaameha Safarkeyga iyadoo laba guji aad heli doontid goobaha wajiga ee Watch.
Hoos waxaad ka arki kartaa shaqooyinka Samsung Sports Watchface fiidiyaha soo socda ee la sameeyay iyada oo lala kaashanayo orodyahanka mootada Robbie Maddison.
Waxaad awoodi kartaa kala soo bax wajiyada cusub ee 'Gear S3' hada kana soo degso barnaamijka 'Gear App Store'.
Hadaad rabto inaad aragto waxa ka mid ah wajiyada ugu fiican ee loogu talagalay Android Wear, ha ka waaban inaad gujiso xiriiriyaha hore.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Smartwatch » Samsung Gear S3 hadda wuxuu leeyahay 3 wajiyo cusub oo waardiye ah
HTC U Ocean: Sawirkii ugu horreeyay iyo qeexitaanno farsamo